Dilal kala duwan oo ka dhacay Magaalada Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Magaalada Muqdisho xalay waxaa ka dhacay dilal qorsheysan oo ay fuliyeen dabley ku hubaysan bistoolado, kuwaasi oo siyaabo kala gedisan dilal uga geystay magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda.
Dilka koowaad, ayaa wuxuu ka dhacay Degmada Dharkiinley, waxaana loo geystay askari ka tirsanaa ciidamada Nabad Suggida Somaliya, kaasi oo dabley hubaysan ay ku toogteen xaafadda Dabakaayo madoow ee Degmada Dharkiinley.
Kooxihii ka dambeeyay dilka askarigaasi ayaa ka baxsaday goobta, markii ay xaqiiqsadeen inay toogteen askariga, dadka deegaanka askariga la dilay magaciisa waxa ay ku soo koobeen Sheekeeye.
Koox kale oo hubaysan ayaa sidoo kale duleedka Magaalada Muqdisho, gaar ahaan deegaanka Weedow, waxa ay ku toogteen nin ganacsade ahaa, kaasi oo lagu dhex dilay goobtiisa ganacsiga.
Goobjoogayaasha waxa ay soo wariyeen Kooxda dilka geysatay oo labo nin ka koobneyd inay ka baxsadeen goobtaasi markii ay dileen ninka ganacsadaha ahaa, lamana oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysay dilka loo geystay ganacsadahaasi.
Weerar kale oo ka dhacay xaafadda Xamar Jadiid ee Degmada Wardhiigley, ayaa waxaa lagu dhaawacay nin Nabadoon ah oo magaciisa lagu soo koobay Nabadoon Cismaan.
Dhamaan dilalkaan qorsheysan iyo dhaawaca Nabadoonka loo geystay ayaa waxa ay dhaceen xalay fiidkii intii Madaxweyne Farmaajo uu ku guda jira booqashadii uu ku tagay Isbitaalka Madiina ee Magaalada Muqdisho, halkaasi oo uu ku booqday dadkii ku dhaawacmay qaraxii shalay ka dhacay Suuqa Kaaw godey ee Degmada Wadajir.
Keating “Qaraxii shalay wuxuu ahaa fal aan kala sooc laheyn oo naxariis darro ka muuqato”